रमाइलो चुट्किलाः कमिला र हात्तीबीच रमाइलो गफ - Everest Dainik - News from Nepal
रमाइलो चुट्किलाः कमिला र हात्तीबीच रमाइलो गफ
एकदिन कमिला स्कुटर चढेर भट्टीमा खान जाँदै थियो रे एउटा हात्तीले लिफ्ट मागे छ ।
अनि हुन्छ भनेर चढाएछ । एक छिनपछि अर्को हात्तीले पनि लिफ्ट मागे छ तर रोकेन, अनि हात्तीले किन नदिएको लिफ्टभन्दा त्यति पनि थाहा छैन ? ट्राफिक नियम एउटा स्कुटरमा ३ जना चढन पाईन्छ मुर्ख ?
याे पनि पढ्नुस शेरे र उसकी बाठी बुढीबीचको यो रमाइलो गफ